Maalgashiga Imaaraadku (UAE) ma “Dibiga Doollood dhegihiisu wax san way maqlaan indhihiisu se ma arkaan” miyaa? – Radio Daljir
Maalgashiga Imaaraadku (UAE) ma “Dibiga Doollood dhegihiisu wax san way maqlaan indhihiisu se ma arkaan” miyaa?
May 2, 2019 7:35 b 0
Ganacsade Cqaadir Cagamadow oo ah Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee gobolka Nugaal kana mid ah dadka sida weyne u falanqeeya siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa si diiran u soodhaweeyey hadalka Madaxweynaha dawladda Puntland ee ah in dawladda Imaaraadku ay maalgalin degdeg ah ka bilaabayso deegaanada PL, waase haddii buu yiri ay dawladda Imaaraadku ka dhabeyso fulinta qorshahaas.
Inkasta oo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu rajo dhow ka muujiyey bilaabashada qorshe ballaaran oo dawladda imaaraadku ku maalgashaneyso deegaanada PL, hadana qaar badan oo ka mid ah dadweynaha reer Puntland kama daadagin arrintaasi waxayna u arkaan “Dibiga Doollood dhegihiisu wax san way maqlaan indhihiisu se ma arkaan.”
Balse Cagamadow ayaa isagu qaba rajo dhow oo la xiriirta inay maashaariicdaasi hirgalaan, waxa uuna docda kala ka hadlayaa aragtidiisa ku aaddan khilaafka soo noqnoqday ee u dhexeeya dawladda Somaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo dabcan shirka loo ballansan yahay inuu dhinacyadaas is diidan uga furmo magaalada Garoowe.
Ganacsade Cagamadow oo jooga Garowe waxa uu u warramay Axmed Sh. Maxamed Tallman.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 435 Wararka 15385